Muuqaal: Al-Shabaab oo kor u qaadey Weerarada ay ka geysanayaan gudaha Kenya Iyo Isbedelka Muqdisho - Hablaha Media Network
Muuqaal: Al-Shabaab oo kor u qaadey Weerarada ay ka geysanayaan gudaha Kenya Iyo Isbedelka Muqdisho
HMN:- Ururka al-Shabaab ayaa kor u qaadey bisha Ramadaan gudaheeda weerarada ay ka geysanayaan gudaha dalka Kenya gaar ahaan dhulka xadka lawadaaga Soomaaliya.
Tan iyo markii ay bilaamatey bisha Ramadaan ayaa al-Shabaab ka fuliyeen weeraro loo adeegsadey miinooyinka dhulka lagu aaso meelo kala duwan oo kamid ah gobolka Waqooyi Bari, waxaana ay ku dileen askar ku dhaw 21 qof.
Habeenkii xalay waxaa Malayshiyaad la aaminsan yahay in ay ka tirsan yihiin al-Shabaab ay gudaha u galeen Fafi oo hootsagta Gaarisa, waxaana ay ku dileen 7 askeri oo booliska ka tirsan iyo macalimiin iskoolka magaaladaas wax ka dhigeysey, waxaana ay qafaasheen qaar kamid ah Macalimiinta Fafi. Malayshiyaadka al-Shabaab ayaa burbur u geystey isgaarsiinta Safaricom, taas oo dhibaato ku noqotey xiriirka ciidamada amniga ee Kenya.
Tirada weerada ee afartii maalmood ee u danbesyey ayaa garaay 10 weerar, 5 kamid ah ayaa ka dhacay Gaarisa, saddex waxay ka dhaceen Mandheera halka labada kalena ay ka dhaceen Lamu.
Waxaa hoos u dhacay weerarada al-Shabaab ay ka geysanayaan gudaha Muqdisho bisha Ramadaan, kadib markii ciidamadii ugu badnaa magaalada laga saarey, lana keeney ciidamo si gaar ah u tababaran, waxaana ciidanku wadaan in ay ay magaalada ka qabtaan dhamaan Malayshiyaadka ku qaraabta magaca ciidanka ee aan nidaamka oggoleyn.
Kenya ayaa dhawaan galaysa doorashadii guud ee Madaxweynaha iyo labada aqal iyo weliba doorashooyinka goloyaasha deegaanka.